avylavitra · Janoary 2015 · Global Voices teny Malagasy
avylavitra · Janoary, 2015
Lahatsoratra farany an'i avylavitra tamin'ny Janoary, 2015
Azia Atsinanana 17 Janoary 2015
Notoherin'ireo mpivarotra amoron-dàlana ao Luneta ilay taratasy fandroahana : "Tinay ny Papa. Tsy hanohintohina azy izahay. Tsy mpampihorohoro izahay".
Azia Atsinanana 14 Janoary 2015
Tsy hoe fotsiny nampitombo ny olan'ny fahalalahana miteny ny fisamborana mpanao hetsi-panoherana, fa koa nanasongadina ireo fomba fanao manjavozavo entin'ireo masoivoho mpampihatra ny lalàna ao amin'ny tanàna sy ireo mpanome tolotra aterineto mihazona ny mombamomba ireo mpampiasa azy
Azia Atsimo 05 Janoary 2015
Rehefa resaka fanatanjahantena iraisampirenena no atao, dia heverina ho toy ny "darafify resin-tory" i India. Mitombo ny fahalinana amin'ity "darafify" ity satria manitatra ny fisehoany amin'ny baolina kitra sy ny tennis io firenena io.
Ao Jamaika: Afaka Manao Izay Hanaitaitra Ve No Sady Hitàna Biraom-panjakàna Ny Vehivavy?
Jamaika 04 Janoary 2015
Niatrika fanakianana noho ny sariny niakanjo T-shirt sy fitafy fitondra milomano nalefany tao amin'ny Istagram i Lisa Hanna, minisitry ny tanora sy ny kolontsaina ao Jamaika.
Kiobà sy Etazonia: “Tonga Ny Andro Maharavo”
Amerika Latina 03 Janoary 2015
Tamin'ny 1974, nosoratan'ilay Kiobàna mpanoratra tononkira no sady mpihira, Silvio Rodríguez, ny : " Ilay Andro Maharavo ho Tonga".
Azia Atsinanana 01 Janoary 2015